Nehemia 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
11 Ɔman no mu mmapɔmma+ no tenatenaa Yerusalem;+ na ɔman no nkae de, wɔbɔɔ ntonto+ de paw edu biara mu biako sɛ ɔnkɔtena Yerusalem, kurow kronkron+ no mu, na akron a aka no de, wɔtenatenaa nkurow a aka no mu. 2 Afei nso, ɔman no hyiraa+ mmarima a woyii wɔn yam+ kɔtenaa Yerusalem no. 3 Eyinom ne ɔmantam+ no mu atitiriw a wɔtenatenaa Yerusalem;+ na Yuda nkurow mu de, Israelfo,+ asɔfo+ ne Lewifo+ ne Netinimfo+ ne Solomon nkoa no mma,+ obiara tenaa n’ankasa agyapade so wɔ ne kurom.+ 4 Na Yuda mma ne Benyamin mma+ no bi nso kɔtenatenaa Yerusalem. Yuda mma mu no, Ataia, Usia ba, Sakaria ba, Amaria ba, Sefatia ba, Mahalalel a ofi Peres+ mma mu no ba, 5 Maaseia ba, Baruk ba, Kolhosen ba, Hasaia ba, Adaia ba, Yoiarib ba, Sakaria a ofi Sela abusua mu ba. 6 Peres mma a wɔtenaa Yerusalem nyinaa yɛ mmarima ahoɔdenfo ahanan aduosia awotwe. 7 Eyinom ne Benyamin+ mma: Salu, Mesulam+ ba, Yoed ba, Pedaia ba, Kolaia ba, Maaseia ba, Itiel ba, Yesia ba; 8 n’akyi no, Gabai ne Salai, wɔn dodow si ahankron aduonu awotwe; 9 ne Sikri ba Yoel, a ɔyɛ wɔn so hwɛfo, ne Hasenua ba Yuda, a ɔyɛ kurow so hwɛfo abadiakyiri. 10 Asɔfo no mu: Yedaia, Yoiarib+ ba, Yakin,+ 11 Seraia a ɔyɛ Hilkia ba, Mesulam+ ba, Sadok+ ba, Meraiot ba, Ahitab+ ba, ná ɔyɛ ɔpanyin wɔ nokware Nyankopɔn fie hɔ; 12 ne wɔn nuanom, ofie+ no mu adwumayɛfo, wɔn dodow si ahanwɔtwe aduonu abien; ne Adaia, Yeroham+ ba, Pelalia ba, Amsi ba, Sakaria ba, Pasur+ ba, Malkiya+ ba, 13 ɔne ne nuanom, agyanom mmusua mu atitiriw,+ wɔn dodow si ahanu aduanan abien, ne Amassai, Asarel ba, Ahsai ba, Mesilemot ba, Imer ba, 14 ne wɔn nuanom, mmarima akantinka,+ wɔn dodow si ɔha aduonu awotwe, na wɔn so hwɛfo+ ne Sabdiel a ofi akatakyi mma mu no. 15 Lewifo+ mu: Semaia a ɔyɛ Hasub ba, Asrikam ba, Hasabia+ ba, Buni ba, 16 ne Sabetai+ ne Yosabad+ a wɔyɛ Lewifo mu atitiriw no, nokware Nyankopɔn fie nnwuma a wɔyɛ wɔ abɔnten so ahwɛfo; 17 ne Matania,+ Mika ba, Sabdi ba, Asaf+ ba, nea odi nnwontofo anim+ na ofi aseda+ dwom ase wɔ mpaebɔ mu no, ne Bakbukia, ɔpanyin a ɔto so abien wɔ ne nuanom mu, ne Abda, Sammua ba, Galal+ ba, Yedutan+ ba. 18 Lewifo a na wɔtete kurow kronkron+ no mu nyinaa dodow si ahanu aduɔwɔtwe anan. 19 Apon ano ahwɛfo+ no ne Akub ne Talmon+ ne wɔn nuanom a na wɔwɛn apon ano+ no, wɔn dodow si ɔha aduɔson abien. 20 Israelfo nkae no, asɔfo ne Lewifo no de, na wɔtete nkurow a aka no mu, obiara wɔ n’agyapade so.+ 21 Na Netinimfo+ no nso, na wɔtete Ofel;+ Siha ne Gispa na na wɔdeda Netinimfo no ano. 22 Nea na ɔda Lewifo ano+ wɔ Yerusalem ma wɔyɛ nokware Nyankopɔn fie adwuma no ne Usi, Bani ba, Hasabia ba, Matania+ ba, Mika+ a ofi Asaf+ mma nnwontofo+ mu no ba. 23 Na ɔhene no hyɛɛ wɔn ho mmara,+ na wɔyɛɛ nhyehyɛe maa nnwontofo no sɛ wɔmma wɔn nea wobehia da biara da.+ 24 Ná Mesesabel a ofi Yuda ba Sera mma mu no ba Petahia yɛ ɔhene boafo wɔ ɔman no ho nsɛm nyinaa mu. 25 Na nkuraa+ a ɛwowɔ wɔn mfuw mu de, Yuda mma no bi tenatenaa Kiriat-Arba+ ne ɛho nkurow mu, ne Dibon ne ɛho nkurow mu, ne Yekabseel+ ne ɛho nkuraa mu, 26 ne Yesua ne Molada+ ne Bet-Pelet+ 27 ne Hasar-Sual+ ne Beer-Seba+ ne ɛho nkurow mu 28 ne Siklag+ ne Mekona ne ɛho nkurow mu 29 ne En-Rimon+ ne Sora+ ne Yamut,+ 30 ne Sanoa,+ Adulam+ ne ɛho nkuraa mu, ne Lakis+ ne ne mfuw mu, ne Aseka+ ne ɛho nkurow mu. Na wɔtenatenaa Beer-Seba kosii Hinom bon mu.+ 31 Ná Benyamin mma no fi Geba,+ Mikmas,+ Aiya+ ne Betel+ ne ɛho nkurow mu, 32 Anatot,+ Nob,+ Anania, 33 Hasor, Rama,+ Gitaim,+ 34 Hadid, Seboim, Nebalat, 35 Lod+ ne Ono,+ adwumfo bon no mu. 36 Lewifo mu no, nkyekyɛm bi a wofi Yuda mu kɔkaa Benyamin ho.